आठ बर्षिय बालकको कोरोनाका कारण दुखद निधन – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ समय: २०:४७:१३
सिन्धुली- कोरोनाका कारण आठ वषिए बालिकाको नि धन भएको छ । सिन्धुली अस्पतालमा शुक्रबार हरिहरपुरगढी गाँउपालिका–१ निवासी आठ बर्षिय बालकको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको सिन्धुली अस्पतालले जनाएको छ । आठ बर्षिय ती बालकको जम्मा तौल दश केजी मात्रै भएपछि अभिभावकले करिब एक साता अघि उक्त अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरेका थिए ।
अस्पतालले बैशाख २१ गते ती बालकको स्वाब सङकलन गरि पिसिआर परिक्षण गर्न पठाएकोमा शुक्रबार बिहान कोरोना सङक्रमण पोजेटिभको रिपोर्ट आएको सिन्धुली अस्पताल कोभिड १९ फोकल पर्सन डा. सागर देवकोटाले बताए ।
त्यस्तै, बल्ल सक्रिय हुँदै स्थानीय तह, आआफ्नै सङ्क्रमण व्यवस्थापन
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न जिल्लाका दशवटै स्थानीय तह जुटेका छन् । नयाँ भेरियन्टसहितको सङ्क्रमण तीब्रगतिमा फैलिरहेको अवस्थामा जिल्लाका स्थानीय तहले आ–आफ्नै तरिकाले आइशोलेसन कक्ष निर्माण गरिरहेका छन् ।
कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले पुरानो आइशोलेनलाई नै ब्युँताएका छन् भने कतिपयले नयाँ आइशोलेसन कक्ष निर्माणमा जुटेका छन् । सङ्क्रमण पुष्टि भएका व्यक्तिलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले आ–आफ्नो आइशोलेसनमा लगेर उपचार गर्ने जिल्लाका सबै स्थानीय तयारीमा जुटेका हुन् ।
जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसि)को यही वैशाख १३ गते बसेको आकस्मिक बैठकले नगरपालिकालाई ३० श्यया र गाउँपालिकालाई २० श्ययाको अक्सिजनसहितको आइशालेसन कक्ष व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको निर्देशन अनुसार दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले वैशाख १५ गते जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र दिक्तेलको भवनमा ३२ बेडको आइशोलेसन कक्ष स्थापना गरेको छ ।
आइशोलेसन सेन्टरका लागि आवश्यक पर्ने दश सिलिण्डर अक्सिजन ल्याइसकिएको र थप दश थान अक्सिजन सिलिण्डर ल्याउने तयारी भइरहेको नगरप्रमुख दीपनारायण रिजालले जानकारी दिनुभयो । उक्त नगरपालिकाले नेपाली सेनाको सहयोगमा २७ जना पुरुष र पाँच जना महिला सङ्क्रमितलाई राखेर उपचार सेवा उपलब्ध गराउन मिल्नेगरी ३२ श्ययाको आइशोलेसन कक्ष निर्माण गरेको हो ।
यस्तै, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले स्थायी कोभिड अस्पताललाई नै आइशोलेसन कक्षका रुपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । हलेसी तुवाचुङ–५ दुर्छिमस्थित स्वास्थ्यचौकीमा गत मङ्सिर ११ गते स्थापना गरिएको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा दश श्ययाको आइशोलेसन कक्ष बनाइएको हो ।
एमबिबिएस डाक्टर सहितको सो अस्थायी कोभिड अस्पताल संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको रु दश लाख र नगरपालिकाको लगानीमा स्थापना गरिएको नगरप्रमुख इवन राईले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऐसेलुखर्कमा बनाइएको पाँच श्ययाको पुरानै आइशोलेसन कक्षलाई नयाँ आइशोलेसन कक्षका रुपमा उपयोग गर्ने तयारी गरेको छ । स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितकै आइशोलेसन व्यवस्था गरिएको गाउँपालिका प्रमुख श्वनाथ निरौलाले बताउनुभयो । केपिलासगढी गाउँपालिकाले बाक्सिलाबजारमा रहेको बसपार्कमा १६ श्ययाको नयाँ आइसशोलेसन कक्ष निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि आवश्यक अक्सिजन भने खरिद गर्न नपाइएको गाउँपालिका प्रमुख कृष्णकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
खोटेहाङ गाउँपालिकाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पताललाई नै आइशोलेसन बनाउने भएको छ । खोटेहाङ–६ इन्द्रेणीपोखरीमा स्थापना गरिएको पाँच श्ययाको अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइशोलेसनका रुपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको गाउँपालिका प्रमुख प्रदीप राईले बताउनुभयो । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले पनि अस्थायी कोभिड अस्पताललाई नै आइशोलेसनमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । वडा नं.–१ याम्खास्थित दश श्ययाको अस्थायी कोभिड अस्पताललाई आइशोलेसनका रुपमा उपयोगमा ल्याउने तयारी गरिएको गाउँपालिका प्रमुख भूपेन्द्र राईले जानकारी दिनुभयो ।
साकेला गाउँपालिकाले अक्सिजनसहितको २० श्ययाको आइशोलेसन निर्माण गरिरहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन मगरले बताउनुभयो । वडा नं.–२ रतन्छास्थित स्वास्थ्यचौकीमा स्थापना गरिएको पाँच श्ययाको अस्थायी कोभिड अस्पतालमा १५ श्या थप गर्न लागिइको हो । रावाबेँसी गाउँपालिकामा २० बेडको नयाँ आइशोलेसन निर्माण शुरु गरिएको जनाइएको छ । वडा नं.–१ कुभिण्डको हरम्टारमा साप्ताहिक हाट लाग्ने स्थानमा टिनले बार र टिनकै छाना हालेर निर्माणको शुरु गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
बराहपोखरी गाउँपालिकामा दश बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रमेश पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सूचना अधिकारी पोखरेलका अनुसार गाउँपालिकाको बुधबार बसेको बैठकले वडा नं. ४ धर्तुङस्थित बालकन्या माविमा दश बेडको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना निर्णय गरेको हो । जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकामा भने आइसशोलेसनका लागि उपयुक्त स्थानको अभाव भएको स्वास्थ्य शाखा संयोजक पवन पोखरेलले बताउनुभएको छ । आवश्यक व्यवस्थापन गरिने उहाँको भनाइ छ ।
दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिका प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेश गरेरमात्र प्रवेश गर्न दिने निर्णय गरेको छ । दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा हालसम्म ८४ जनामा सङ्क्रमण देखिएको जनाइएको छ । पहिलो चरणमा ७१ जनामा सङ्क्रमण देखिएको जिल्लामा नयाँ भेरियन्टसहित देखा परेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण १३ जनामा देखिएको जिल्ला कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (डिसिसिएमसि) खोटाङका संयोजक एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्क्रमित सबैको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ । सङ्क्रमितमध्ये चार जना कोभिड अस्पताल भर्ना भएका छन् भने बाँकी सबै होम आइशोलेशनमा रहेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिक्देलले जानकारी दिनुभयो ।